musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Kiyi West inodzima 2021 Yekufungidzira Fest Paradhiso
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Culinary • tsika nemagariro • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Zviitiko zveSiginecha seMusoro weHoro nePet Masquerade zvichiri kurongwa, uye pachave nemazhinji mapato ezvekunyepedzera uye mamwe madiro emafaro ekunakidzwa.
Yakakurumbira Key West chiitiko chakanzurwa nekuda kwe COVID-19 denda.
Zviitiko zvakawanda zvakarongwa zvemutambo zvichaenderera mberi neCOVID-19 protocols.
Masquerade Yakakurumbira zvakare iriko parizvino.
Key West yekufananidzira yeFantasy Fest parade uye mugwagwa wakanaka paDuval Street haizoitwe gore rino, varongi vegumi-zuva masking nemutengo wekupfeka wakazivisa Muvhuro manheru, kudzivirira kubva pakupararira kunogona kuitika kwe COVID-10 uye nemhando dzakasiyana.
Ivo vakasimbisa iyo yakazara Gumiguru 22-31 mutambo uye mazhinji ezviitiko zvaro zvakarongwa zvichaenderera, uku vachikurudzira varipo kuti vateerere nemitemo yekudzivirira yeCOVID.
"Fantasy Fest ichataridzika zvakasiyana gore rino, asi haina kubviswa," akadaro director director Nadene Grossman Orr. "Zviitiko zvemasaini zvakaita seHooddress Bhora uye Pet Masquerade zvichiri kurongwa, uye pachave nemapati mazhinji emanyepo uye mamwe madiro emafaro."
Grossman Orr akati yakakurumbira Masquerade Kurume, yakarongwa Gumiguru 29, parizvino yakamiswa.
Ose ari maviri ekuratidzira kuratidzira uye yemugwagwa wakanaka inokwevera makumi ezviuru zvevanhu ku Key WestNhoroondo yedhorobha.
Varongi veZombie Bike Ride uye mushandirapamwe wekutsvaga mari kuti vasarudze mutambo mambo namambokadzi vakakanzura zviitiko zvavo kupera kwesvondo rapfuura, vachitaura nezvezvinonetsa zveCOVID.
Kufungidzira Fest yakavambwa muna1979 uye kubvira ipapo yakawana kurumbidzwa kwepasi rese pamakwikwi ayo, mapati anoshamisira uye mapato ezvekupfeka.
Grossman Orr akati chirongwa chezviitiko chinofanira kuvandudzwa mumazuva anouya uye akakurudzira vanhu kuti vatarise nguva nenguva.